Kheyraadka Xubinta - Caymiska Caafimaadka Maxalliga ah ee Gobolka Washington - CHPW
Baro xuquuqdaada xubinnimo, sida aan kula xisaabtami karno, iyo waxa aad sameyn karto haddii aadan ku faraxsanayn daryeelkaaga.
Ogow xuquuqda aad leedahay
Adiga oo xubin ka ah Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington (CHPW), waxaad leedahay xuquuq aad ku hubiso inaan kuugu adeegno dantaada ugu fiican. Xuquuqahan iyo dhowrista sharciga ah ayaa fure u ah adeegeena adiga kugu caawinaya waxayna naga caawinayaan inaan la xisaabtano.
Wax ka baro xuquuqdaada daryeelka caafimaadka sida uu qabo sharciga federaalka iyo gobolka.
Eeg xuquuqdaada ➜
Waxaad xaq sharci u leedahay asturnaanta, iyo xaq u leedahay inaad ogaato sida aan u ilaalino macluumaadkaaga.
Haddii aadan ku qanacsanayn daryeelkaaga ama adeeggaaga.
Gudbi cabasho ➜
Xuquuqda Dhalinyarada iyo Waalidka
Carruurta yar yar iyo waalidkoodba waxaa laga yaabaa inay ku kala aragti duwanaadaan daryeelkooda.
CHPW waxay cabireysaa tayada daryeelka xubnaheena, iyo talaabooyinka aan qaadayno si aan u horumarino.
Baro sida ➜
Haddii laguu diiday caymiska, waxaad xaq u leedahay inaad rafcaan qaadato.
Ma aragtid macluumaadka aad raadineyso? La xiriir kooxdayada Adeegga Macaamiisha.
Waxaan heli karnaa 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, Isniinta ilaa Jimcaha.
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Julaay 28, 2020